Iiklinikhi zethu kunye namaQabane - Vondt.net
Iiklinikhi zethu kunye namaQabane
- Umbono wethu? Sisoloko sisebenzela ukuba sibe ngoyena mntu uQeqeshiweyo oLuntu oGunyazisiweyo ngezeMpilo kwiMisipha, iiTendon kunye namaQabane
I-VondtKlinikkene yinethiwekhi yobuchwephesha ehlala ikhula yeekliniki ezinomnqweno wokuhlala inobuchule obuphezulu obukhethekileyo kuvavanyo, unyango kunye noqeqesho. Kuluhlu olungezantsi uyakufumana ulwazi oluthe kratya malunga neeklinikhi zethu ezinxulumene nazo, kunye namaqabane. Umbono wethu kukuba uzive unentembelo yokuba ufumana olona lwazi lubalaseleyo lwesigulana olunikezelwa ziingcali zononophelo lwempilo ezigunyaziswe esidlangalaleni ngobuchule beengcali kwimisipha, imisipha kunye namalungu.
I-Lambertseter: IZiko leLambertseter Chiropractor kunye nePhysotherapy
UCecilie Thoresens vei 17, 1153 Oslo (iLenteketereter Senter- iHelsehuset)
I-Eidsvoll: IZiko leMpilo leNzululwazi ye-Eidsvoll kunye nePhysotherapy
Isango le-Wergelands 5, 2080 Eidsvoll (Sundet)
I-Eidsvoll: IZiko leChiropractor leZiko leNtsholongwane yoNyango
IGladbakkvegen 1, 2070 eRåholt (AMFI - Helsehuset)
Molo, igama lam ndinguAlexander Andorff. I-chiropractor egunyazisiweyo kunye ne-biomechanical rehabilitation therapist.
Ndingumhleli oyintloko weVondt.net kunye neVondtklinikkene- kwaye ndisebenza e IZiko leLambertseter Chiropractor kunye nePhysotherapy. Njengonxibelelwano lwala maxesha oluphambili kukuphazamiseka kwemisipha, kuyonwabisa ngokwenene ukunceda abaguli babuyele kubomi obungcono bemihla ngemihla.
Uphononongo olubanzi kunye nendlela yanamhlanje kunyango zezona zinto zixabisekileyo kwiiklinikhi zobuhlungu- kunye namaqabane ethu. Sisebenza ngokusondeleyo neengcali zonyango kunye neeGPs ukulungiselela iziphumo. Ngale ndlela, sinokunika uninzi amava kunye nokukhuseleka ngakumbi kwesigulana. Amaxabiso ethu asisiseko aqukethe amanqaku aphambili ama-4:
Unyango lwalemihla, olusekwe kubungqina
Isigulana ekugxilwe kuso-Njalo
Iziphumo ngokuGqwesa okuphezulu
Ngabalandeli abangaphezu kwe-85000 kumajelo eendaba ezentlalo, kunye nabakhenkethi abazizigidi ezili-15 ngonyaka (ukusukela ngoMatshi ka-2022), ayimangalisi into yokuba siphendule yonke imihla kwimibuzo emalunga nonyango olucetyiswayo kwilizwe liphela ukuba kunzima ngokwendawo ukuba sifikelele kuthi. Ngamaxesha athile sifumana imibuzo emininzi kangangokuba kunokuba nzima ukuyiphendula yonke, kwaye yiyo kanye le nto sililelile eli candelo- apho siya kuthi ngokuthe ngcembe, ukongeza kwiiklinikhi zethu ezibandakanyekileyo, songeze izindululo zethu ngaphakathi kucetyiswe esidlangalaleni iingcali zezempilo ezigunyazisiweyo kwindawo ohlala kuyo.
Isigulana: Ixesha leBhuku leSihlunu kunye nezigulo ezidibeneyo?
Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga neeklinikhi okanye ukubhukisha idinga, ungacofa kwiikhonkco ezingasentla. Ukutyunjwa kwenziwa kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo zeeklinikhi. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuba unemibuzo okanye izinto ezinje.
I-Physiotherapist okanye iChiropractor: Sebenza nathi?
Iikliniki zethu zinokukhomba kumanyano olululo lwentlalo, uluhlu lwezigulane ezixakekileyo, amathuba amahle emivuzo kunye neqonga elihle lokufunda. Sisoloko sikhangela abantu abaqeqeshiweyo abanezakhono - kwaye amaxesha amaninzi sinamathuba nangona sidla ngokungafuneki ukuba sithumele izithuba zomsebenzi ngenxa yabantu abafaka izicelo bengacelwanga. Iikliniki zentlungu zigxininise ngokukhethekileyo kwi-chiropractic yanamhlanje kunye ne-physiotherapy, kodwa sinomdla kakhulu ekuveni kwi-naprapaths, i-osteopaths kunye ne-masseurs. Ukuqhagamshelana nathi, sicela ukuba uthumele umyalezo othe ngqo kwenye yezi kliniki zingasentla. Sijonge phambili ukuva kuwe.